15 दिनभित्रमा जिटिएको अध्यक्षको मनोनित पदको नोटिफिकेसन आउनसक्ने? – खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचार15 दिनभित्रमा जिटिएको अध्यक्षको मनोनित पदको नोटिफिकेसन आउनसक्ने?
September 19, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
कोलकाता, 19 सेप्टेम्बर
यदि जिटिए हटाउनु छ भने पनि चुनाउ नै हुनुपर्छ, यदि जिटिए चल्नु हो भने पनि चुनाउ नै हुनुपर्छ। किन भने जिटिए सभाले जिटिए खारेजको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ अनि केन्द्र सरकार र जिटिएबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर बहुसंख्यक मत जुन प्रस्तावले पाउँछ, त्यही हुन्छ। खारेजको लागि बहुसंख्यक मत भयो भने खारेज हुन्छ, सञ्चालनको लागि बहुसंख्यक मत भयो भने चल्छ।
कसैले पनि खारेज गर भन्दा खारेज हुने र कसैले चल्नुपर्छ भन्दा चल्ने व्यवस्था होइन-जिटिए। कि त जिटिएभन्दा कुनै ठूलो व्यवस्था आयो भने सानो व्यवस्था आफै हटेर जान्छ। अर्थात छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड भयो अथवा पिपिएस भयो जिटिए स्वतस्फुर्त हटेर जान्छ।
सूत्रअनुसार ममता व्यानर्जी अहिले जिटिएमा फेरि कुनै व्यक्तिलाई मनोनित गरेर राख्ने सोच बनाइरहेकी छन् । यसको लागि धेरैको नाम प्रस्तावित छ। हिल टिएमसीबाट शान्ता छेत्री अनि एलबी राईलगायत विमल गुरुङ, विनय तामाङ पनि यही दौडमा रहेको बताइएको छ। यद्यपि, सूचीको प्राथमिकतामा अनित थापाको नाम रहेको बताइएको छ।
सूत्रअनुसार 15 दिनभित्रमा यसको नोटिफिकेशन आउने सम्भावना छ।
चुनाउदेखि यता जिटिए मुख्यसचिवको देखरेखमा छ। चुनाउपछि जिटिए कसको हातमा जाला भन्ने निक्कै माथापच्ची चलेको थियो। धेरैले फेरि पनि जिटिएलाई अनित थापाले नै चलाउने हल्ला पनि चलेको थियो। यता विमल गुरुङले जिटिएमा शान्ता छेत्री या त एलबी राईले चलाउनुपर्ने मत पनि राखेका थिए। हल्लाअनुसार मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अनित थापालाई नै त्यतिखेर जिटिएको कार्यभार दिन चाहन्थिन्।
तर यता अनित थापाले अबोप्रान्त जिटिएमा मनोनित भएर बस्न नचाहने आशय प्रकट गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यदि मलाई जिटिएमा जानु छ भने चुनाव मार्फत नै जानेछु। नोमिनेट भएर होइन।’ यही अडानको कारण अनित थापाले ममता व्यानर्जीले मनोनय गर्न खोजेको पद अस्विकार गरेको बताइएको थियो।
अनित थापा अहिले आफ्नै दल खोलेर बसेका छन्। अहिले सङ्गठन विस्तारमा लागिपरेका छन्। उनको दलका उपाध्यक्ष रुदेन लेप्चा सरकारसितै मिलेर काम गरिरहेका छन्। अनित थापाकै पार्टीका अमरसिंह राई पनि राज्य सरकारकै निकायमा छन्। अनित थापा आफैले पनि राज्य सरकारसित मिलेरै काम गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सूत्र अनुसार अहिले नवन्नामा जिटिएबारे चर्चा चलिरहेको छ।
यता युसुफ सिमिकहरूले शान्ता छेत्रीलाई लिएर प्रोजेक्ट गर्ने काम तीब्र गरिरहेका छन्। उता एलबी राईलाई लिएर पनि उस्तै पहलकदम चलिरहेको छ। विमल गुरुङ अनि विनय तामाङहरूले आफ्नो बर्चस्व बलियो बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेकै छन्। सुत्रको भनाइअनुसार हो भने पहाडमा भइरहेका हरेक गतिविधिमाथि राज्य सरकारको गिद्धे नजर छ।
सुत्रले भनेको छ, नवान्नमा जिटिएको अध्यक्ष मनोनित गर्ने चर्चा छ। चर्चामा अनित थापा शीर्षमा छ।
तर अनित थापाले अघिबाटै मनोनित पदमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन्। 15 दिनभित्रमा जिटिए अध्यक्षको पदलाई लिएर राज्य सरकारले नोटिफेकिसन छोड्न सक्ने सुत्रको दाबी छ।
यदि सुत्रको सङ्केत सही हो भने एउटा प्रश्न उठ्नेछ, के अनित थापाले मनोनित पद ग्रहण गर्छन्? कि चुनाउ मार्फत जिटिएमा जाने जनतालाई दिएको बचनमा कायम रहन्छन्?